Falastiiniyiinta oo ku wareersan ciddii baddali lahayd Cabbaas - BBC News Somali
Madaxweyne Maxamuud Cabbaas oo ku dhex lugaynaya isbitaal ku yaalla magaalada Ramallah
Waxaa la baahiyay sawirro muujinaya Madaxweynaha Falastiin Maxamuud Cabbaas oo dhex lugaynaya isbitaalka gaarka loo leeyahay ee ugu wanaagsan Ramallah, isaga oo qaba dharka bukaanka iyadoo aysan cidna caawinaynin.
Sawir sidoo kale ay shaaca ka qaadeen qoyska Madaxweynaha ayaa muujinaya Cabbaas oo ku kor fadhiya sariirta isbitaalka oo akhrisanaya Wargeys.
Saraakiisha isbitaalka Ramallah waxay sheegeen in hoggaamiyaha 83 sano jirka ah uu maray qalinka dhagta ah balse hadda uu xanuun dhanka sanbabka uu dareemayo islamarkaasna la dawaynayo si uu soo bogsado.
Farrrinta isbitaalka ayaa u muuqata mid dejin karta wararka Falastiiniyiintu ay isla dhexmaraayeen ee ahaa in madaxweynaha uu geeri u dhaw yahay.
Xaaladda caafimaad ee Madaxweyne Maxamuud Cabbaas waxay ka turjumaysaa in siyaasadda Falastiin ay marayso meel xasaasi ah.
Madaxweyne Cabbaas (midig) Yassir Carafat (Bidix) sanadkii 2003-dii
Kala qaybsanaanta wayn ee ka dhaxeysa garabka uu hoggaamiyo madaxweynaha iyo ururka Xamaas ayaa Falastiin ka dhigay sida dal curyaan ah.
Ururka Xamaas ayaa doorashadii baarlamaanka 2006-dii Falastiin ka dhacday ku guulaysatay, waxayna ahayd sanad un kaddib markii Maxamuud Cabbaas uu xilka qabtay.
Sanadkii 2007-dii, Xamaas waxay la wareegeen awoodda Marinka Qaza kaddib markii ay dagaal la galeen garabka Fatax oo ay ka awood roonaadeen.
ilaa xilliggaasi, ma jirin doorasho madaxtinimo iyo mid baarlamaani ah oo la qorsheeyay inay dhacaaan.
Madaxweyne Maxamuud Cabbaas ayaa hadda xilka haya muddo 13 sano ah oo ka dhigan in afar jeer uu xilka sii hayo.
Sanadkii tagey, Doorasho ayaa ka dhacday Daanta Galbeed oo kaliya ah taasoo ay qaadaceen ururka Xamaas.
Falastiiniyiinta "oo xiriirka u jaraya" Mareykanka
Dhinacyada uu hardanka ka dhexeeyo
Wadahadallo furan ayaa ka dhex jira dadka Falastiiniyiinta dhexdooda oo ku aadan cidda qabanayso xilka haddii uu meesha ka baxa Madaxweyne Cabbaas.
Mas'uuliyiin ka tirsan Israa'iil iyo dublumaasiyeen shisheeye ayaa iyagana isha ku haya qofka noqon doona Madaxweynaha xiga ee Falastiin.
Waxaa lagu wadaa in Ururka Xamaas ay Ismaacil Xaniyah uusoo magacabaan inuu noqdo madaxa Hoggaanka Ururkaasi
Afahayeen u hadlay Xamaas oo la yiraahdo Xaazim Qaasim ayaa ku adkaystay in qof kasta oo u tartamaya doorashada madaxtinimada inuu hadafkiisu yahay ka shaqaynta danaha reer Falastiin dhammaan balse ahayn ka shaqaynta arrinta garabka Fatax oo kaliya ah.
Maleeshiyaadka Xamaas oo xoog ku galaya xarunta ammaanka garabka Fatax ay ku lahaayen Qaza sanadkii 2007-dii
Sharciga asaasiga ee Falastiin wuxuu dhigaya haddii uu madaxweynaha geeriyoodo ama howshiisa gabo, waa in Guddoomiyaha baarlamaanka uu si ku meel gaar ah uu qabto xilka illa doorsahada ay ka dhacayso.
Guddoomiyaha baarlamaanka Falastiin waxaa ah Caziz Dweik oo ka tirsan Xamaas, waxayn saraakiil badan oo ka tirsan garabka Fatax ay ku doodeen in sharcigaasi uusan ahayn mid lagu dhaqmi kara. waxayna saraakiisha Fatax sheegeen in baarlamaanka Falastiin aysan yeelan wax kalfadhi ah tobbankii sano ee lasoo dhaafay sababtuna waxay ku shegeen xayiraadda Israa'iili ay kusoo rogtay Ururka Xamaas. waxaana arrintaasi dhalisay kala qaybsanaanta siyaasadeed ee halkaasi ka jirta.
Sanadkii lasoo dhaafay, Maxamuud Al-Caluul oo ahaan jiray guddoomiyihii hore ee magaalada Nablus ayaa loo magacaabay guddoomiye ku-xigeenkii ugu horreeyay ee uu yeesho garabka Fatax.
Xubno ka tirsan xisbiga ayaa sheegay in haddii Madaxweyne Cabbaas uu shaqadiisa uu qabsan waayo ay maamulka si kumeel gaar ah ula wareegi doonaan muddo saddex bilood ah ilaa doorasho laga qabanayo.
Waxaana la filayaa in guddida ugu sarraysa garabka Fatax ay go'aan ka gaaraan ugu dambayntii qofka noqon doona Madaxweynaha xiga ee Falastiin.
Waa kuwe xubnaha ugu firfircoon
Falastiniyiinta waxay u qabaan Marwaan Barquutii inuu yahay ninka uga shacbiyadda badan kaaso hoggaamiyay maleeshiyaadka Tanziim sanadihii 2000 ilaa 2005-tii markaaso ay taagnayd kacdoonkii looga soo horjeeday Israa'iil.
Inkastoo Marwaan uu ku jiro xabsi ku yaalla Israa'iil, weli waxaa uu saamayn ku leeyahay Falastiin, wuxuuna garwadeen ka ahaa dadaalo lagu midaynaya Falastiiniyiinta.
Khalil Shikaki oo ah Agaasimaha xarunta maamulka iyo sahanka Falastiin , wuxuu yiri " Tageero wayn ayuu ka haystaa Marwaan Daanta Galbeed iyo Marinka Qaza "
Wuxuu intaasi ku daray in haddii doorasho la qabto uu ka guulaysan karo Maxamuud Cabbaas iyo Ismaaciil Xaniyah iyo dhammaan garabyada kale.
Boor uu ku dhagan yahay sawirka Marwaan Barquuti oo ay wataan dibadbaxyaal gudaha magaalada Qaza 30-kii bishii April sanadkii 2017-kii
Marwaan Barquuti ayaa horraan sheegay in inuu taratami doono dooradshada isagoo xabsiga ku jira.
Mana muuqata astaamo muujinaya in Israa'iil ay xabsiga kasoo dayn doonto Marwaan, waxaana jiri kara in musharrax kale uu magaciisa kusoo istaago intii isaga uu doorashada u loolami lahaa.
Waxaa jira saddex qof oo kale oo saamayn ku leh gudaha Falastiin.
Jibril Rajoub: Wuxuu kamid ahaan jiray meleeshiyaad ka howlgasha Daanta Galbeed, wuxuuna kusoo caanbaxay cayaaraha. sanadkii lasoo dhaafay waxaa loo doortay xoghayaha guud ee guddiga dhexe ee garabka Fatax.
Majed Faraj: Waa madaxa sirddoonka Falastiin, wuxuuna kamid ahaa mas'uuliyiintii ka qayb gashay wadahadaladii fashilmay ee Israa'iil iyo Falastiin.
Muxammad Dahlan: Wuxuu hoggaaminyay ciidamada ammaanka Falastiin sanadkii 2007-dii, waxaa laga saaray xubinnimada garabka Fatax kaddib markii ay murmeen Madaxweynaha, hadda wuxuu ku nool yahay magaalada Abu dhabi, wuxuuna xiriir dhaw la leeyahay hoggaamiyeyaasha gobolka.
Dagaalka Beled Xaawo: "Carruurteyda waxa ay ka mid ahaayeen 14 qof oo uu madfac dilay"
Dhageyso: Jubaland oo guulo ka sheegatay dagaalka Beledxaawo